Rwanda iyo Uganda oo soo afjaray xiisaddii u dhexeysay – Idil News
Posted By: Idil News Staff January 28, 2022
Masuuliyiinta Rwanda,ayaa saaka oo Jimcaha ah sheegay inay dib u furi doonaan xuduudda ay la wadaagaan Uganda, taas oo soo afjaraysa ku dhawaad saddex sano oo is-mariwaa ah oo u muuqday mid dhaawacay dhaqaalaha labada dal, isla markaana sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo hubeysan.
Ku dhawaaqistan,ayaa timid kadib muddo ay diblomadsiyad ahaan kala aamusnaayeen labada dal, iyada oo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu Rwanda u diray ergo uu ku jiro wiilkiisa Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba, si ay wadaxaajood ula galaan dhiggiisa Rwanda Paul Kagame.
Kainerugaba, oo ah taliyaha ciidamada lugta ee Uganda, ayaa ku sugnaa Rwanda Sabtidii. Horraantii toddobaadkan Museveni ayaa isbedello muhiim ah ku sameeyay laamihiisa amniga, isagoo xilka ka qaaday taliyihii sirdoonka militariga oo ay Rwanda si joogta ah u dhaleeceysay. Talaabadan ayaa u muuqata inay saamaysay Rwanda.
Rwanda ayaa markii ugu horreysay xirtay marinka mashquulka badan ee xadka Gatuna bishii Febraayo 2019, waxaana wadahadalladii xigay ee ay dhexdhexaadinayeen Angola iyo Congo noqdeen kuwa lagu guuldareystay in lagu xalliyo khilaafka, taas oo Uganda ku khasabtay in ay si gaar ah ula xaajooto Rwanda.
Dowladda Rwanda ayaa sheegtay in xadka u dhexeeya labada dal uu si rasmi ah dib ugu furmi doono Isniinta. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay inay ka go’an tahay Rwanda inay si wanaagsan uga qayb qaadan doonto sidii caadiga ahayd ee xiriirka labada dal.
Dib u furista iyo soo celinta xiriirka ayaa farxad gelin doonta labada dal ee Rwanda iyo Uganda kadib sanado badan oo dhibaato ay ku qabeen ganacsiyadii suuqdayada ee lumay iyo fursada kale.Uganda, ayaa loo diiday suuq weyn oo ay wax soo saarkeeda u beec geyn jirtay, waxayna u muuqatay inay luminaysay heerkii ugu sarreeyay waxa ay ugu yeertay cunaqabatayn ganacsi. Gudaha Rwanda xayiraadda xadka ayaa ugu dambayntii kiciyay qiimaha cuntada la qalajiyey.